Ergaa Hatattamaa Uummata Oromoo Maraaf!! – Kichuu
HomeErgaa Hatattamaa Uummata Oromoo Maraaf!!
Iccitii Gola Tika Bilxiginnaa (PP) Keessaa Ba’e.
Bilxiginnaan torban lamaan darbeef basaastota sadii sabaan Amaara ta’anii afaan Oromoo dubbachuu dhaga’uuf barreessuu danda’aniif Oromoota muraasa eenyummaa isaanii gananii maallaqaan bitaman namoota 2900 leenjisaa ture yeroo ammaa xumuree Magaalaa Finfinneef Godinoota addaa naannoo Finfinnee keessa gadhiisee jira akka tasaa namoonni sabboontota leenjii sana irratti hirmaatan keessaa namoota 5 yeroo leenjii sana fudhatan dhimmicha fudhachuu didan poolisiin butamanii bakki isaan geeffaman kan hin beekamne ta’uu qaamni leenjii sana fudhatee isaanii wajjin jiru iccitii kana Uummata koo biraan naaf ga’i jedhee adaraa natti himee jira.
1. Leenjitoonni kun namoota sabboontota ta’an sabboonaa fakkaatanii itti dhiyaatanii basaasuu namoota shakkan irratti tarkaanfii hanga ajjeesuuf hiisisuutti akka irratti fudhatan kallattiin kennameefii jira kanaaf Uummanni Oromoo akka of eeggatu.
2. Namoonni leenji’an kun hanga suuqii, manneen baaburaa, manneen nyaataaf dhugaatii sabboontonni Oromoo itti fayyadaman qorachuun hanga summiin maatii sabboontotaa fixuutti ergamni itti kennamee jira.
3. Namoonni Leenjii fudhatan kun xiyyeeffannoo guddaa kan irratti godhan namoota Lixa Oromiyaa Ginciif Gincii gadii dhufan irratti xiyyeeffannoo guddaan akka hojjetan ergamni kennameefii akka jiruuf qarshii hangi barbaadan akka kennamuuf Lafti magaalaa Finfinnee keessaa bakka filatanii akka fudhatan waadaa galameefii yeroo ammaas qarshii guddaa fudhatanii bobba’anii akka jiraniif Uummanni Oromoo akka of eeggatu sabboonaan quuqama qabu kun dhaamsa uummataaf dhaamee jira.
Sababa kana godhaniif gaafa leenjitoota hubachiisa yeroon ammaa kun paartii isaaniif yeroo kamiiyyuu caalaa rakkisaa akka ta’eef baraaramuu qabna yaada jedhu dhaamanii yeroo ammaa waraanni isaanii dhumee waan jiruuf haala Oromiyaa keessa jiru lolaan to’achuun nutti ulfaata jechuun dhaamsa cimaa ergamtoota isaanii kanaaf dhaamanii kennanii jiru.
Sabboontonni Oromoo nama waliin deeman, kan waliin haasa’an akkasumas bakka meeshaalee nyaataa bitan bakka dhaabbataa ta’ee bitanii fayyadamuu irraa akka of qusatan yoo danda’ame mana nyaataa bakkeedhaa akka hin fayyadamne jechuun sabboonaan sabaa kun uummataaf dhaamee jira.
Gaa’ila qofaa miti kan obboloota keenya walitti hidhee Oromummaa fi faajjii oromooti